Iziphumo zeWatercolor kwizicatshulwa kunye neFotohop kulo naluphi na uhlobo lohlobo. | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Isiphumo seWatercolor kwizicatshulwa kunye neFotohop
Arnau Aparisi | | Photoshop, Tutorials
Kwiintsuku ezidlulileyo besikufundisile tshintsha umbala wombhalo ngeFotohop. Ukuthatha inyathelo eliya phambili kwaye ujonge ukwazi okungakumbi malunga namathuba asinikwa yiFotohop kwizicatshulwa. Namhlanje siza kufunda ngendlela elula nika isiphumo se-watercolor kwizicatshulwa zethu, esi siphumo siye sathandwa kakhulu kule minyaka idlulileyo kwaye kumanyathelo ambalwa alula sinokunika iitekisi zethu iziphumo ezinobuchule kunye nezibonwayo.
Ungayisebenzisa njani isiphumo se-watercolor?
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukufumana umfanekiso ophezulu yamabala e-watercolor, nangona sinokusebenzisa enye yethu ukuba siyiskena okanye siyikhuphele enye kwi-Intanethi. Kwimeko yam ndigqibe kwelokuba ndisebenzise ngu kwi-Intanethi. Kubalulekile ukuba umfanekiso esiwukhethayo ube nomgangatho olungileyo, ke zama ukuchitha ixesha elincinci ukhetha umfanekiso.
Nje ukuba sinomfanekiso lixesha lokuba siye emsebenzini. Kuqala sivula ifotoshop kwaye senza ifayile entsha, ukhetha ifayile> entsha okanye cmd + n kwaye sikhetha ubungakanani esifuna bona.
Sikhetha isixhobo sokubhaliweyo (T iqhosha) kwibar yesixhobo.
Senza Cofa emazantsi kwaye urhuqeOku kuyakwenza ibhokisi ebophelelayo yokubhaliweyo kwethu kwaye kuyasivumela ukuba sibhale kuyo.
Sibhala isicatshulwa ngaphakathi kwebhokisi yokubopha.
Sikhetha wonke umbhalo kwaye sitshintshe ifonti kunye nobungakanani befonti.
Sirhuqa umfanekiso wamabala e-watercolor kwi-canvas.
Sibeka umaleko womfanekiso we-watercolor ngaphantsi komaleko wokubhaliweyo.
Ngoku sihambisa isicatshulwa siye kwelonabala sithanda kakhulu Ukusebenzisa.
Cofa ekunene kuludwe lokubhaliweyo kwaye ukhethe ukhetho, rasterize.
Sikhetha isixhobo umlingo wand (W isitshixo, iWand), kunye sinika ucofa ngentla kwesicatshulwa (kubalulekile ukuba kukhethwe umaleko wokubhaliweyo).
Sinika cofa ekunene iqhosha ngaphezulu kwesicatshulwa esikhethiweyo kwaye ukhethe ukhetho, fanayo.
Siya kwinqanaba le-watercolor kwaye sinike cmd + c okanye kwithebhu yokuhlela>ukukopa. Sinikela ku cmd + v okanye ukuhlela>pegar.
Ngoku kuya kuphuma umaleko omtsha, oku kuya kuba ngumaleko ngombhalo we-watercolor.
Siyasula lonke ulwahlulo olungaphezuluUkuze ukwazi ukusebenzisa isicatshulwa emfanekisweni, yiya kwithebhu yefayile> gcina njenge> kwaye ukhethe ulwandiso .png, oku kuya kusishiya kuphela ifonti.
Nje ukuba sibe nayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Isiphumo seWatercolor kwizicatshulwa kunye neFotohop
Ndinomdla kakhulu, ndiyasithanda isiphumo sokusebenzisa isicatshulwa kuphela esinamabinzana apholileyo kwaye siyakhele eludongeni, ndingayisebenzisa nangakumbi ukwakheka :)
molo ndingazikhuphela njani iziphumo zeacurela?
UPolarr ngumhleli wemifanekiso omtsha obalaseleyo we-iOS kunye ne-Android
Ungasifaka njani isicelo seVintage kwiifoto zakho kunye neFotohop